Grammar (၂၃) မျိုးကို ကဗျာရွတ်ပြီး လေ့လာကြမယ် – TodayZ
Grammar (၂၃) မျိုးကို ကဗျာရွတ်ပြီး လေ့လာကြမယ်
(1)When = by the time
By the time နဲ့ when ကိုကွယ်၊ ပြန်လှန်ပြောင်းရေးမယ်၊ ကျန်တာတွေကိုပြန်ကူးရေး၊ ကော်မာ “,” ထည့်လို့ပေး။
When = Ving
When ၀ါကျကိုရှာလို့ကွယ်၊ Subject အထိဖယ်ပေးထား Verb ကို V1ပြောင်း ing နဲ့ပေါင်း၊ ကျန်တာတွေကိုပြန်ကူးရေး၊ ကော်မာထည့်လို့ပေး၊ Pronoun ကို Noun ပြောင်းလို့၊ ကျန်တာပြန်ကူးစို့၊ တစ်ခါတစ်ရံ When အစား and, as, because များမေးထားတယ်လို့ သတိထား When-Vingမခက်သား၊ ရေးစို့လွယ်လွယ်လား။
It is / was …… who / that ……
V1ကြိယာတွေ့သောအခါ It is နဲ့စပါ၊ V2ကြိယာတွေ့ရင်တော့ It was ရေးလိုက်ပေါ့။ လူပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့သောအခါ who နဲ့ဆက်လိုက်ပါ၊ လူမဟုတ်ဘဲတွေ့ခဲ့လို့ that ဟုရေးကြစို့၊ ကျန်စကားလုံးများပြန်ရေးပေး၊ ရေးစို့လွယ်လွယ်လေး။
Double Negative Pattern
There is / was no …… that / who …… not ……
V1ကြိယာပေးရင်ကွယ်၊ there is no စမယ်၊ V2ကြိယာပေးထားတော့ there was no ပေါ့။ မေးခွန်းထဲမှာ every ပါ၊ သူ့ကိုဖယ်လိုက်ကွာ၊ All the တွေ့လည်းဖြုတ်ထားကွဲ့ ပြန်မထည့်ရဘူးကွဲ့။ Sub ဖြစ်တဲ့နာမ်ပုဒ်ဟာ တစ်ခုကိန်းဖြစ်ရမှာ၊ who, that, where တို့သင့်ရာရွေး၊ နာမ်နောက်ကပ်လို့ပေး၊ ပေးထား Verb ကိုအကူခေါ် do, does, did လေးနော် not ထည့်ပေးကာရေးလို့ပေး ကျန်တာပြန်ကူးရေး။
ဂုဏ်ရည်ပြကိုရွေးလို့ကွယ် Verb to be ထိဖယ်၊ ကျန်တဲ့နာမ်ကို မူတည်လို့ ဆိုင်ရာနာမ်နောက်ပို့၊ နာမ်တွေကြားမှာ ကော်မာခြား ရှေ့နောက်ချိန်ဆ သတိထား။
Neither …… nor
မတူတာနှစ်ခုတွေ့ရင်ကွယ်၊ neither …… nor ဆက်မယ်၊ တူတာကိုတော့တစ်ခုထည့် စကားဆက်ဖြုတ်ခဲ့။ အဓိကကျတာကြိယာ no, not ဖြုတ်လိုက်ပါ။ ကတ္တား၊ ကြိယာ သေချာကြည့် ကိန်းကာလကိုညှိ။
မတူတာနှစ်ခု တွေ့သောအခါ both …… and နဲ့ဆက်ပါ။ တူတာကိုတော့ တစ်ခုထည့် စကားဆက်ဖြုတ်ထားခဲ့။ ကတ္တား၊ ကြိယာ သေချာကြည့်၊ ကိန်းကာလကိုညှိ။
မတူတာနှစ်ခုတွေ့သောအခါ not only …… but also ဆက်လိုက်ပါ။ တူတာကိုတော့တစ်ခုထည့် စကားဆက်ဖြုတ်ထားခဲ့၊ but also နောက်က subject ကြည့် ကိန်းကာလကိုညှိ၊ neither nor သာတွေ့ခဲ့က အငြင်းကြိယာပြုလုပ်ကြ။
Although …… In spite of
Although နေရာ In spite လာ subject တူသလားကွာ၊ တူသော subject တစ်ခုဖျက် Although ၀ါကျဆက်၊ Although ဆက်မှ Verb ကိုကွယ် V4ပြင်ရေးမယ်၊ နောက်ဝါကျကိုပြန်ကူးရေး ကော်မာထည့်လို့ပေး။
In spite of …… Although
In spite နေရာ Although လာနောက်ကျ subject ရှေ့ပို့ပါ၊ ing ကိုမူရင်းပြောင်း ကော်မာထည့်လို့ပေါင်း၊ ရှေ့ပို့ subject အကဲဖြတ် နောက်ဝါကျမှာ နာမ်စားကပ်။
Too … to > Not … enough to
Too ကိုဖယ်လို့ not ထည့်ကာ Adjective (adverb) ကိုရှာ၊ ပြောင်းပြန်စကားလုံးပြန်၍သုံး သူ့နောက် enough ထည့်လိုက်ဦး။ V2 ကြိယာတွေ့ရင်ကွယ် did ကူခေါ်၍ သုံးရမယ်၊ စာကြောင်းကြည့်ကာသေချာရေး not enough to လွယ်လွယ်လေး။
Not … enough … to > too … to
Not ကိုဖယ်လို့ too ထည့်ကာ Adjective (adverb) ကိုရှာ၊ ပြောင်းပြန်စကားလုံးပြောင်း၍သုံး enough ဖြုတ်လိုက်ဦး၊ did ကူသုံးလို့တွေ့ရင်ကွယ် V2 လို့ပြင်မယ်၊ စာကြောင်းကြည့်ကာသေချာရေး too … to မခက်သေး။
Too … to > so … that
Subject တူသောဝါကျမှာ too ကို so ပြောင်းပါ၊ adjective နောက်မှာ that ထည့်ပေး to ကိုဖြုတ်၍ရေး၊ ထို to နေရာအစားမှာ Subject ပြန်ထည့်ပါ၊ subject နောက်ကကြိယာများ အငြင်းပုံစံထား။
Subject မတူဝါကျမှာ too ကို so ပြောင်းပါ၊ Adjective နောက်တွင် that ထည့်လို့ကျန်တာပြန်ကူးစို့၊ Object အား Subject ထား၊ အငြင်းကြိယာရေးစို့လား၊ V1ရှေ့က to ဖြုတ်ပေး Object သင့်ရာနောက်ဆုံးရေး။
If …… > Unless ……
If ရဲ့နေရာ Unless လာပုံသေမှတ်ထားပါ၊ ကြိယာကိုသေချာကြည့် ကြောင်းကျိုးညီအောင်ညှိ။ If clause Verb ဟာ P (အဟုတ်ဝါကျ) ဖြစ်လျှင် Main clause Verb ကိုပြောင်းပြန်ပြင်။ If clause Verb ဟာ N (အငြင်းဝါကျ) ဖြစ်က အဲဒီ Verb ကို P ပြင်ကြ။
P = positive (အဟုတ်ဝါကျ)
N = negative (အငြင်းဝါကျ)
Nm : If တစ်လုံးတည်း unless ပဲ နောက်ဝါကျကပြောင်းပြန်ပဲ။ If not ဆိုတော့ unless ပေါ့နောက်ဝါကျက ဒီအတိုင်းပေါ့။
Unless …… > If ……
Unless နေရာ If လာ အကူကြိယာခေါ်လိုက်ပါ၊ not ထည့်ပေးရမှာ၊ ကျန်တာတွေပြန်ကူးရေး ကော်မာထည့်လို့ပေး။
The + D2 + S + V ……, the + D2 + S + V + ……
If, because စကားဆက်များ ဖြုတ်လိုက်တော့ The + D2 နဲ့ စရေးပေါ့။ ထိုသို့ D2 ရေးပြီးခါ Subject Verb ကပ်လိုက်ပါ။ ကော်မာထည့်ကာ နောက်စာကြောင်း ရှေ့ပုံစံအတိုင်း လိုက်၍ပြောင်း။
The more ရေးလိုက်ကြ၊ အငြင်းဝါကျဖြစ်သောအခါ not ဖြုတ် the less ရေးရမှာ၊ subject နာမ်ပုဒ်ဖြစ်နေက be ကို ဖြုတ်လိုက်ကြ၊ subject နာမ်စားဖြစ်ရင်ကွယ် be ကို ထည့်ရမယ်၊ adj (adv) ပါပြီး အငြင်းဖြစ်က the less adj/adv ပြောင်းလိုက်ကြ။
Subject ဟာ လူဖြစ်လာ၊ Who နဲ့ ဆက်လိုက်ပါ။ Objective ဟာ လူဖြစ်တော့ Whom နဲ့ ဆက်လိုက်ပေါ့။ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဖော်ပြလို၊ Whose နဲ့ဆက်ပါဆို။ Subject, Object လူမဟုတ်၊ which, that ဆက်လိုက်စို့။ အရာဝတ္ထု ဖော်ပြပေး what နဲ့ ဆက်လို့ရေး။
Article (A-An-The) သုံးနည်း
ရေတွက်ရတဲ့ နာမ်ရှေ့မှာ A ကိုသုံးကြပါ၊ (အ) အသံပါတဲ့ နာမ်ရှေ့တော့ An ကို သုံးကြပေါ့။ မြစ်၊ ပင်လယ်နဲ့ သမုဒ္ဒရာ၊ ကျွန်းစု တောင်တွေပါ၊ သတင်းစာ၊ ဟိုတယ်၊ နိုင်ငံများ၊ ရုပ်ရှင်၊ ဇာတ်ရုံ မှတ်ကာထား။ လောကကြီးမှာ တစ်ခုတည်းပါ နေ၊ လ၊ မြေကြီး၊ ကောင်းကင်ပြာ၊ အားလုံးရှေ့မှာ The ကိုသုံး မှတ်ကြအလွယ်ဆုံး။
V-1 ပုံစံ ရေးနည်း
V-1 ပုံစံရေးနည်းကွာ၊ အားလုံးသိအောင် ပြောပြမှာ၊ Subject နောက်မှာ V-1 ကပ် ရိုးရိုးဝါကျမှတ်။ Subject ပြီးတော့ do, does လာ not လေး ကပ်လိုက်ပါ၊ ကပ်ပြီး V-1 တပ်၊ အငြင်းဝါကျမှတ်။ Do, Does လေးနဲ့ Subject မှာ V-1 လေးလည်း လိုက်ရမှာ။ နောက်ဆုံးမှာ (?) တပ်၊ မေးခွန်းဝါကျမှတ်။
W.H မေးခွန်းပုံစံ ပြောင်းနည်း
ဘာမေးတာလည်း အရင်ကြည့်ပါ၊ W.H question စရေးမှာ၊ Helping ပါရင် ရှေ့ပို့ရ ကျန်တာကူးလိုက်ကြ။ Who နဲ့ Which နဲ့ သုံးရင်ကွာ နောက်က Noun ကပ်ပါ၊ Helping မပါရင် ခေါ်မှာပေါ့ V-to-do ကိုတော့။ Does ကိုရှေ့ကသုံးတဲ့အခါ Verb က (s) ကို ဖြုတ်ရမှာ၊ did ကိုသာသုံးရင်တော့ V1 ပြောင်းမှာပေါ့။
နာရီရှေ့မှာ at သုံးပါ၊ မွန်းတည့်၊ အရုဏ်၊ ညလည်းပါ၊ နေ့တွေရှေ့မှာ on သုံးတော့၊ နှစ်၊ လ အမည် in နဲ့ပေါ့။ စတင်တဲ့အချိန် form သုံးမှာ ထွက်ခွာအရပ်လည်းပါ၊ ကြာတဲ့အချိန် for သုံးတော့၊ နိုင်ငံ၊ မြို့ရွာ in နဲ့ပေါ့။ အရပ်ဌာနရှေ့နားမှာ at ကို သုံးလိုက်ပါ၊ စီးလို့ရတဲ့ယာဉ်တွေတော့ by နဲ့တွဲမှာပေါ့။
V-ing ပုံစံ ရေးနည်း
Subject ပြီးတော့ am, is, are ၊ ing လေး တွဲလိုက်ပါ၊ ရေးပါ မှတ်ပါ ပုံစံများ ing တဲ့လား။ Subject ပြီးတော့ am, is, are ၊ not လည်း လိုက်ခဲ့ပါ၊ ing ကို ရေးပါလား၊ အငြင်းဝါကျများ။ Is နဲ့ Are ကို ရှေ့မှာတည် Subject-ing နောက်ဆုံးမှာ (?) ထား အမေးဝါကျများ။
Subject-V2တွဲရေးမည်၊ ရိုးရိုးဝါကျဖြစ်ပါသည်၊ Subject-did not-V1 တော့ အငြင်းဝါကျဖြစ်မှာပေါ့။ Did ကို ရှေ့ကရေးရမည် Subject-V1 လိုက်ပါသည်၊ (?) ကို နောက်ဆုံးတော့ V2 မေးခွန်း ဖြစ်မှာပေါ့။